ओलीको बोली निकै महङ्गो पर्ने संकेतः फेरि यस्तो अभिव्यक्ती दिएपछि भीम रावल आक्रोशित, नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको चेतावनी ! – GALAXY
ओलीको बोली निकै महङ्गो पर्ने संकेतः फेरि यस्तो अभिव्यक्ती दिएपछि भीम रावल आक्रोशित, नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको चेतावनी !
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेका कुरा चर्चाको बिषय बन्ने गरेका छन् । ओलीको बोली अहिले बिष सरह साबित भएको छ । माधव कुमार नेपालले आफूलाई गद्धार भनेपछि नयाँ पार्टी खोलेका थिए ।
ओलीले विवादास्पद अभिव्यक्ती दिने गरेका छन् । यसैबीच, एमाले फुटेपछि पनि उनले दिएको अभिव्यक्तीप्रति माधव नेपाललाई साथ नदिएका भीम रावल लगायतले रोस प्रकट गरेका छन् । नेकपा एमालेमा फेरी पनि विभाजन हुने संकेत देखिएको छ । एमाले विभाजन हुँदा कतै नलागेका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठनको तयारी थालेका छन् ।
खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एक कार्यक्रममा पिलो निचोरिएको तर खील निस्कन अझै बाँकी रहेको बताएपछि माधव नेपालको साथ् छाडेका नेताहरू तर्सिएका छन् । त्यसलगत्तै एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता भीम रावलले नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेका छन् ।
विभाजनपछि माधवकुमार नेपाल पक्षमा नगएका एमालेका रावललगायतका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सके सुधार्ने नत्र विद्रोह गर्ने तयारी बारे छलफल गरेका छन् ।
एमाले फुटाएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका माधव नेपालले आफूहरूलाई महत्व नदिएर तेस्रो तहका नेताहरूलाई लिएर अगाडी बढेपछि नेपाल समूहमा तत्काल नजाने जनाएका नेताहरूले फरक रणनीति बनाउन बैठक नै बोलाएका छन् । एमाले विभाजन भैसक्दा पनि नेता नेपाललाई साथ नदिएर कतै नलाग्ने भनेका नेताहरूले ओली पक्षमा नै रहनुले एमाले फेरि फुट्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरुले ओली पक्षमा विद्रोहको तयारी गर्ने देखिएको हो ।